कसले हेर्छ देशको स्वास्थ्य ?
१. डा.बाबुराम भट्टराई दिनहुँ यसरी योगा गर्छन्, स्वास्थ्य बनाउँछन् । निजी स्वास्थ्यप्रति प्रचण्डदेखि ओलीसम्म, देउवादेखि कमल थापासम्म सचेत छन् । तर देशको स्वास्थ्य कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने विषयमा कोही पनि सचेत छैनन् ।
सबै नेताहरुलाई सत्तास्वार्थले अचेटेको छ । सबैलाई सत्तामा पुग्ने, नसके प्रभावकारी बन्ने, पार्टीलाई दर्विलो बनाउने चिन्ता देखिन्छ । सबै शीर्ष नेताले हातेमालो गरेर देशलाई साझा मार्गबाट सबल बनाउने चिन्ता कसैमा छैन ।
२. आइजीपी बनेका छन् सर्वेन्द्र खनाल । यिनले सिधै भनिदिए– सुन काण्डबारे बोल्दिन । यतिमात्र होइन, यिनले राजधानीको ट्राफिक जामका सम्बन्धमा पनि मुख खोलेका छैनन् । यिनी ट्राफिकको जिम्मेवारी बोकेर डिआइजी पदमा थिए, दुईचार ठाउँमा बत्तीको प्रवन्ध गरे, ट्राफिकहरुलाई सक्रिय पनि पारे । जब यिनी आइजीपी बने, यिनले लथालिङ्ग भएको ट्राफिक प्रवन्ध गराउनेतिर ध्यानै दिएनन् ।
एकप्रकारले आइजीपी अनसिन छन् । हराएका छन् । आइजीपी पद पाउनासाथ यिनको दर्शन दुर्लभ भएको छ । प्रहरी परिचालनमा यिनको उदासिनता बढेको छ ।
यिनले सुन काण्डमा जो संलग्न छ, तिनलाई छाडिन्न भन्न सक्नुपथ्र्यो, केही पनि बोल्दिन भनेर अपराधकै पक्ष लिएकोजस्तो देखिन्छ । कार्यालयसमयमा मात्र होइन, दिनैभरि कोटेश्वर, चावहिल, थापाथली, कालिमाटी, कलंकी, बालाजुको ट्राफिक जामले आमनागरिक हैरान छन् । विरामीले समेत बेलैमा उपचार पाउन सकेका छैनन् । यी विषयमा आइजीपी आँखा चिम्लेर बस्नु भनेको उनको अकर्मण्यता हो ।
भन्न त अपराधिकरण निर्मूल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् यी आइजीपी । तर आइजीपी बनेपछि यिनको अपराध समाप्त पार्नेतिर ध्यान कम जानथालेको देखिन्छ । आइजीपीले विशेष प्रहरी कार्यक्रममा अपराध न्यूनिकरणमा बोल्ड निर्णय गरेर सक्रियता देखाउन जरुरी छ । आइजीपी खनाको कुशलता पहिले निकै देखिएको हो, आइजीपी बनेपछि उनको कुशलतामा ब्रेक लागेकोमा धेरैले गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।